Pamhepo Kushambadzira terminology: Iwo Ekutanga Tsananguro | Martech Zone
Dzimwe nguva tinokanganwa kudzama kwatakaita mubhizinesi uye tinokanganwa kungopa mumwe munhu sumo kune yakakosha terminology kana mazita izvo zviri kuyangarara patinotaura nezve kushambadzira kwepamhepo. Rombo kwauri, Wrick yaisa pamwechete izvi Kutengesa kwepamhepo 101 infographic iyo inofamba iwe kuburikidza nezvose zvakakosha mazwi ekutengesa iwe unofanirwa kubata hurukuro neako wekushambadzira nyanzvi.
Affiliate Marketing - Inotsvaga vekunze vadyidzani kushambadzira chigadzirwa chako kune avo vateereri kukomisheni.
Banner Ads - inobata tarisiro yevatengi vatengi kuitira kuti vangobaya kushanyira yako saiti kana kuti vanyatso ziva yako brand.
Content Curation - Sefa kuburikidza nemafashama epamhepo zvemukati & maoko ekutora zvinhu zvemhando yepamusoro zvekugovana, kugadzira imwe-yekumira newsfeed yenhengo yega yega yemusika wako wekutengesa.
Content Marketing - Inogadzira zvinobatsira, zvinonakidza, uye zvinonakidza zvemukati senge blog zvinyorwa, ebook, mavhidhiyo & infographics kukwezva kutarisisa, kuvaka chiremera chiremera, uye kuhwina bhizinesi nyowani.
Contextual Ads - inoratidza kushambadzira pane imwe webhusaiti inoenderana nezviri mukati mayo, kana hyperlink yakatarwa mazwi akakosha kune webhusaiti yemushambadzi.
Shanduko Yekuvandudza Kugonesa - inoshandisa analytics uye mushandisi mhinduro kuti uvandudze webhusaiti yako uye shandura paseti mabhurawuza mukubhadhara vatengi.
Digital Marketing - inogadzira isina musono, yakabatana mutengi ruzivo pane dzakasiyana nzira dzedhijitari - kusanganisira nhare, mitambo, & maapps, podcast, Internet radio, mameseji eSMS, nezvimwe.
Ratidza Ads - inobata tarisiro yevatengi vatengi kuitira kuti vangobaya kushanyira yako saiti kana kuti vanyatso ziva yako brand.
Yakawana Midhiya - apo vatengi pavanoparadzira buzz kwauri kuburikidza nehutachiona izwi remuromo.
Email Marketing - Inotumira mameseji anobatsira, akakodzera, eemail kune vanogamuchira kuti vachengetedze ivo vachibatana nekambani yako uye kuvaka kuvimbika kwechiratidzo.
Inbound Marketing - inokwezva, inovandudza, inozivisa, uye inovaraidza vatengi vangangoita kuburikidza nekuita zvirimo, technical SEO, uye maturakiti maturusi, kuhwina bhizinesi uye kuwana kuvimbika kwevatengi.
Influencer Marketing - inovaka hukama neboka rakasarudzwa revanhu vanokanganisa sarudzo dzemisika yako yekutenga.
Tungamira Kuchengeta - Kuvaka hukama nematanho asina kugadzirira kutenga kuburikidza zvinonakidza zvemukati, zvinobatsira maemail, zvemagariro midhiya kubatanidzwa.
Tungamira kurovera pasi - Kuongorora maitiro epamhepo epamhepo kuyera huwandu hwavo hwekufarira mune chako chigadzirwa, uchigovera mamaki kuteedzera yega inogona kuve mutengi chinzvimbo mune yekutengesa fanera.
Marketing Automation - inogadzira yakadzokororwa yekushambadzira mabasa uye pakarepo inokuzivisa iwe kune mamwe maitiro evatengi kuti ikubatsire iwe kuona iro chairo meseji rekutumira kune chaiye munhu panguva yakakodzera.
Mobile Marketing - Inotumira mameseji akasarudzika eSMS, pushira zviziviso, mu-app kushambadzira, QR kodhi inoongorora, uye zvimwe kune vatengi 'nhare mbozha zvichienderana nemaitiro chaiwo, senge nzvimbo yazvino kana nguva yezuva.
Native Kushambadzira - inogadzira zvemukati zvemukati zvakagadzirirwa kuti zvifanane nesaiti yemuparidzi yepamhepo, uyezve inobhadhara kuzviisa pamwe chete nezvimwe zvinyorwa zvesaiti.
Pamhepo Ruzhinji Hukama - Kufuridzira pamhepo midhiya & nharaunda, inochengeta ziso pane zviri kutaurwa nevanhu pamusoro pekambani online uye inotsvaga nzira nyowani dzekubatana nevatengi.
Muridzi weMedia - yako wega online real estate: yepamutemo webhusaiti, nhare mbozha, blog, uye zvemagariro midhiya mapeji.
Paid Midhiya - akabhadhara kushambadzira, anotsigirwa machira, kana akabhadhara kutsvaga.
Bhadhara-Per-Dzvanya (PPC) - Inonongedzera vatengi chaivo kuburikidza neakatsigirwa maLinks, uye A / B bvunzo kuti uone kuti ndeipi kushambadza inoguma nekuwedzera kudzvanya.
Kutangazve - inonanga kushambadzira kune vanhu vakatoshanyira yako saiti (asi vasina kutenga) kuburikidza nekutumira mameseji kana zvakasarudzika zvinopihwa.
Kutsvaga Injini Kushambadzira (SEM) - inovandudza kuoneka kwesaiti mumapeji ekutsvaga enjini yekutsvaga, kuwedzera nzvimbo masosi kuburikidza neSEO, kuzadza & backlinks.
Tsvaga Engine Optimization (SEO) - inoisa pamusoro pekutsvaga mazwi akakosha mumapeji ewebhu webhusaiti kusimudzira mitsva yekutsvaga injini, uye inoita shuwa kuti yako saiti yakagadziridzwa yekufambisa, zvemukati, kiyi-rakapfuma meta tag, uye mhando inbound zvinongedzo.
Social ads - Inowedzera kusvika kwekambani yako kune vateereri vatsva kuburikidza nemashambadziro akabhadharwa kana zvakasimudzirwa zvinyowani pane akasiyana masocial media masaiti.
Social Media Marketing - Inowedzera chiziviso cheruzivo & saiti traffic nekuvaka nharaunda yevatengi kuburikidza nesocial media., Kutumira zvinyorwa izvo zvinopararira zvakashata, uye kupindura kuzvichemo, zvikumbiro, uye kurumbidza.
Kupatsanura Kuedzwa - kuyedza kusingaenzaniswi uko akasiyana ari A / B akaedzwa nebofu rinodzora boka kuti vaone izvo zvinopa mhedzisiro inobudirira kwazvo.
Sponsored Content - inogadzira zvemukati zvemukati zvakagadzirirwa kuti zvifanane nesaiti yemuparidzi yepamhepo, uyezve inobhadhara kuzviisa pamwe chete nezvimwe zvinyorwa zvesaiti.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa yedu yakabatana link ye Wrick munyaya ino.
Tags: affiliate marketingbanner adscontent curationContent Marketingcontextual adschiyero chekushandura optimizationdigital advertisingkuratidza adsyakawana midhiyaEmail Marketinginbound Marketingkushambadzira kushambadzirakutungamirira kutarisiralead alamamaketing mazwimarketing automationmazwi ekutengesamobile marketingkushambadzira kwazvinoonline paruzhinji hukamanhepfenyurovanobhadharwa midhiyakubhadhara pakukandappckudzokororasearch engine marketingSearch Engine Optimizationseopasocial adskushambadzira munharaundaSocial Media Marketingkupatsanurwa kuedzazvakatsigirwa zvemukati
Beyond Demographics: Mhando dzeVateereri Vepamberi Chikamu Chikamu Chinoita Kuti Chiitwe Chinobatika
Ndezvipi Zvingaitika Kuti Yako Yemagariro Maseru Sarudzo Inopa Iko Kudzoka pane Investment?